नेपाल समाचार Archives - London Nepal News
काठमाडौं- विवाहमा दाइजोको रुपमा रुपैयाँ, पैसा, गाडी दिनु आम चलन हो । तर, भारतको मध्यप्रदेश बसिआएका सपेरिया (सर्प नचाउने) समुदायमा अनौठो दाइजो दिन चलन छ । उक्त समुदायले दाइजोको रुपमा २१ वटा विषालु सर्प दिने गरेका छन् । यो परम्परा सदियौँदेखि चल्दै आएको छ । सर्प दाइजो दिएन भने वैवाहिक सम्बन्ध छिट्टै टुट्छ भन्ने मान्याता छ । भनिन्छ केटीको विवाह पक्का भएपछि उसको परिवारका सदस्यले सर्प समात्न सुरु गर्छन् । यस समुदायका बच्चाहरु सर्पदेखि डराउँदैनन् । बरु सर्पसँगै खेलिरहेका देखिन्छन् । खासगरी यो समुदायको पेशा सर्प समात्ने हो । यी समुदायका मान्छेहरु अरुलाई सर्प देखाएर पैसा कमाउँछन् ।
काठमाडौं- “प्लेन टुक्राटुक्रा भई छरिएको थियो । मरेका गिद्ध छरपस्ट थिए । एउटा रुखमाथि प्लेन ठोक्किएको थियो त्यो रुखमा गिद्ध बस्थे । प्लेन बज्रिदा बडेमानको त्यो रुख भाँच्चिन पुगेको थियो” ७५ वर्षअघि नेपाली भूमिमा भएको पहिलो विमान दुर्घटनाका ती दृश्य गोकुलप्रसाद शर्माको स्मरणमा अझै पनि ताजा छ । वि. सं. २००१ सालको त्यो घटना । पुस २ गते राति विमान बडेमानको आवाजका साथ बजारियो । सिरहाको भेडियाका गाँउलेले बेलाबखत आकाशमा विमान उडेको देख्ने गरेकै थिए । आफ्नै गाउँपछाडि रातको समयमा विमान बज्रिएपछि निद्रामा मस्त स्थानीयमा खैलाबैला मच्चिनु स्वभाविक थियो । आगोको मुस्लो देखेपछि उनीहरू घटनास्थलतर्फ कुदाकुद गरे । त्यसबेला...
काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका कामदारको हकवालालाई आर्थिक सहायातास्वरुप ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात गएको साउनदेखि फागु्नको दोस्रो सातासम्म ५ सय २४ मृतकका हकवालालाई उक्त रकम खर्चेको हो । सो अवधिमा मृत्यु भएका कामदारको संख्या भने ५ सय ५३ रहेको छ । आर्थिक सहायता पाउनेमध्ये ४ सय ८२ जनाले ७ लाख रुपैयाँ र ४२ जनाले १० हजार रुपियाँ पाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं– नेपाल समाचारपत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक पुष्करलाल श्रेष्ठको निधन भएको छ । श्रेष्ठको उपचारको क्रममा राजधानीको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा बुधबार बिहान ११ बजे ४९ मिनेटमा निधन भएको पत्रकार इश्वरराज ढकालले जानकारी दिए । श्रेष्ठको पार्थिव शरीर आज साढे १२ बजेदेखि भूगोलपार्कस्थित निवासमा राखिने छ भने दिउँसो ३ दिने पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिनेछ । करिब ५ महिनाअघि नाकमा समस्या देखिएका कारण उनको राजधानीको वयोधा अस्पतालमा नाक र त्यसलगत्तै ब्लुक्रसमा मृगौलाको पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । उक्त शल्यक्रिया लगत्तै पत्रकार श्रेष्ठमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखापर्दै आएका थिए । त्यसपछि उनको नर्भिक अघि भारतको मेदान्त अस्पतालमा पनि उपचार भएको थियो । मेदान्त...
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रभावकारी ढंगले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरेका छन् । प्रेस युनियन कैलालीले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘काँग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका राम्रोसँग निभाएको । हामीले प्रतिपक्षको भूमिकामा निभाउदा आगो लगाउने, रेलिङ भाँच्ने काम गरेको छैन । त्यो हामीबाट हुँदैन पनि ।’ साथै वर्तमान सरकारलाई आगामी चुनावबाटै काँग्रेसले प्रतिस्थापन गर्ने सभापति देउवाले ठोकुवा गरे । यस्तै, फरक प्रसंगमा सभापति देउवाले पार्टी अधिवेशनको मुखमा आफ्नाविरुद्ध गलत प्रचारबाजी भरहेको बताए । ‘पार्टीका साथीहरु काँग्रेसले गरेको कामको प्रचार भन्दा पनि मेरो विरोध गर्दै हिडेका छन्,’ उनले भने,‘ मेरो आग्रह छ , मेरो विरोध...